Huawei Y5p Mint Green (2GB/32GB) ~ ICT.com.mm
HomeHuawei Y5p Mint Green (2GB/32GB)
Huawei Y5p Mint Green (2GB/32GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Size: 5.45 inches Color: 16 million colors Type: TFT LCD (IPS) Resolution: HD + 1440 x 720 Pixels CPU: Octa-core Processor (4 x Cortex-A53 2.0 GHz +4x... [Learn more]
Brand: HuaweiSKU: 156323N/ASee more: Huawei, Mobile Phones, Products, Recent Updates, ShopFilter by: Smartphones
Resolution: HD + 1440 x 720 Pixels
CPU: Octa-core Processor (4 x Cortex-A53 2.0 GHz +4x Cortex-A53 1.5 GHz)
Rear Camera: 8 MP (f / 2.0 aperture), AF
Front Camera:5MP (f / 2.2 aperture), FF
Battery: 2920 mAh (rated value), 3020 mAh (typical value)
Huawei Y5p က Huawei ရဲ့ Entry Level အဆင့် ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 5.45” နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတာကြောင့် ကိုင်တွယ်ရ မကြီးလွန်း၊ မသေးလွန်းဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ အတွင်းမှန်မျက်နှာပြင်အတွက် TFT IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors မျက်နှာပြင် အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Resolution အားဖြင့် HD+ Resolution (720 x 1440 pixels, ~295 ppi density) ရရှိမှာပါ။ OS အဖြစ် Android 10 နဲ့ မောင်းနှင်ပေးထားပြီး User Interface အတွက် EMUI 10.1 နဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google Play Services တော့ ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ System ပိုင်းမှာ Chipset အဖြစ် Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး 2.0 GHz Octa-core (CPU), PowerVR GE8320 (GPU) တို့ဖြင့် တွဲဖက်ပေးထားပါတယ်။ Internal Storage – 32 GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး microSD ကတ်ကို သီးသန့် ထည့်သွင်းလို့ရတဲ့အတွက် Storage ထပ်မံတိုးမြှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ RAM 2GB ဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြ Facebook, Viber တို့လို Apps တွေကို အဆင်ပြေပြေ တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ နောက်ကျောဘက်ကင်မရာအဖြစ် 8MP (wide) ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး HDR နဲ့ Panorama တို့ဖြင့်လည်း ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာတော့ 5MP ရှိ Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး Face Unlock လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘတ္ထရီအတွက် 3020mAh ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားပြီး microUSB 2.0 နဲ့ အားပြန်သွင်းပေးရမှာပါ။ အရောင်ကွဲအနေနဲ့ အပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အနက်ရောင် တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
HUAWEI Y5p isa5.45-inch HD bazel-less FullView Display1Useful, sharp experience. The compact body is also convenient for one-handed use and explores the wide surface.
The HUAWEI Y5p has 32GB of memory storage and two nano SIM cards and 512 GB2There are three slots that can be used with SD card slot. It offersalarge space for storing apps and videos. You can keep all your needs on the phone and be ready for new adventures.
Durable for everyday activities
HUAWEI Y5p battery with 3020 mAh battery lasts 17 hours of video3It can be viewed and paused forafew hours and charged without charge. The power-saving feature will help reduce battery consumption and ensure your day-to-day functioning with confidence.
The beauty of every perspective
The HUAWEI Y5p's 8 MP HD rear camera captures valuable life images with good quality photos. HDR mode lets you see details even in unequal lighting. The5MP Eastfilm camera can detect your different personalities with different lighting.
Advanced Face Unlock
With HUAWEI Y5p's Face Unlock technology, it's fast and easy to use. Advanced algorithms and accurate facial expressions make it easy to use without worry.
Total price:K211,567 K187,741
This item: Huawei Y5p Mint Green (2GB/32GB) K152,000